आफ्नो रुवाईले अरुलाई रुवाउने उम्मर खय्याम - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
आफ्नो रुवाईले अरुलाई रुवाउने उम्मर खय्याम
अरुसँगै मैले पनि ज्ञान बिज रोपेँ
अनि आफ्नै बाहुले त्यसलाई हुर्काउन मेहनत गरेँ
त्यसबाट मैले फसलका रुपमा जे पाएँ त्यो त्यत्ति नै हो
‘म पानी जस्तै कहाँ कहाँबाट आएँ र हावाजस्तै कहाँ–कहाँ जानेछु ।
आहा ! हामी पनि माटामा मिल्नुभन्दा पहिले हातमा बाँँकी रहेकालाई हुनेसम्म उपभोग गरौं ;
धुलो धुलोमै मिल्नेछ ,धुलै मुन्तिर विश्रान्ती छ
गित न गायक ,सुरा न साकी ,सबै व्यर्थ छन्–अन्य पनि
आहा ! प्रिय यो बटुको भरिद्यौ
जसले भुतका पश्चाताप तथा भविष्यका भयलाई गर्दछ ।
भोली ? भोलीको चर्चै किन ?
भोली त म आफैँ कालकवलित हुनसक्छु ।
तरुछाया मुन्तिर रोटीको एक ठुन्को होस् ।
भरिपुर्ण मधुपात्र तथा सरस कविताको पुस्तक होस् ।
नजिकै तिमीले गित पनि गाउने भए कतै
सुनसान विजन पनि मेरा लागि हुँदो हो स्वर्गसमान ।
बुद्धिमानहरुलाई वादविवाद गर्दै रहनदेऊ
सृष्टिको झगडा पनि छाडिदेऊ
आऊ यो कोलाहलदेखि पर एक कुनामा बसेर
तिम्रो जसले खेल मनायो हामी उसकै खेल मनाऔँ ।
कवि उम्मर खय्यामको बारेमा धेरै कुरा अज्ञात छ । तर पनि खय्यामका काव्यहरुले प्रस्तुत गरेका झल्काहरु साँच्चै अद्भुत ,अलौकिकर अप्रतिभ छन् । खय्यामको अर्थ अरबी भाषामा पाल बनाउने हुँदा उनको पेशाको बारेमा थोरैतिन नामबाट अड्कल काट्न सकिन्छ ।
सन् १९१२ का दिन पृथ्वीभरिका काव्यप्रेमीहरुको ठुलो दुर्भाग्यको दिन थियो । हामी तमाम काव्य पिपासुहरु एक अनमोल सम्पदाबाट वञ्चित हुने दिन थियो । भएको के थियो भने त्यो दिन एउटा ठुलो पानीजहाज समुद्रमा सधैँको लागि विलिन भएको थियो । संसारका अनमोल काव्यकृतिहरुमा उत्कृष्ट काव्यकृति ‘ उम्मर खय्यामका रुवाईयातहरुको सँगालो पनि त्यहि पानी जहाजसँगै डुबेको थियो । उनका थोरै तिन रुवाईहरु भने आजभन्दा सय वर्ष अगाडि नै एक अङ्ग्रेजी कवि एडवार्ड फिजराल्डले अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर प्रकाशित गरेका रहेछन् । त्यसकै रानारुनी झलकमा आज उम्मर खय्यामलाई अनुमान लगाउन खोजीरहेका छौँ ।
उम्मर खय्यामको जन्म आजभन्दा लगभग नौसयवर्ष पहिले फारस देशको खुरासानमा भएको थियो । उनी त्यो युगको स्वर्णिम कालमा जन्मेको अनुमान गरिन्छ । त्यो ठाउँमा मात्र आठवटा विश्वविद्यालय र कैयौँ पुस्ताकालयहरु थिए अरे ।
खैय्याम त्यो समयका एक अद्भुत कवि थिए । उनका रुवाईत (४ पङ्क्तिका कविता) ले आज पनि पाठकका मनमस्तिष्कलाई उत्तिकै ऊष्ण ढङ्गले झङ्कृत गर्दछ । उनी मस्त आनन्दमा रम्ने कवि थिए । जीवनको मस्ती नै आनन्दमा झुम्नुमा छ भन्थे । उनी सुरा ,सुन्दरीका प्रेमी थिए । जीवनको असीम गहिराईलाई काव्यले छुने यस्ता विरल कविभित्र खय्याम पर्दछन् । रहस्यदर्शी सुफिको प्रेमदर्शनमा उनका कविता चुर्लम्म डुबेका छन् ।
उम्मर क्षणजीवि थिए । उनी भन्छन्–‘जिवनरस चाख्नलाई एक निमेस मात्र समय मिल्छ । जबसम्म जीवन छ ,तबसम्म पिउँदै गर,जीवन फर्किएर आउँदैन । जीवनको भरपुर आनन्द र मुक्तिलाई उनले मुलमन्त्र बनाएका थिए ।
उम्मर खय्याम टोम्ब तस्विर
उनले भगवानलाई पनि यसो भनेका छन् –‘भगवान् मैले कहिल्यै तिम्रो पुजा गरिनँ । न तिमीसम्म पुग्ने प्रयत्न नै गरेँ । परन्तु म यति हुँदा पनि निराश छैन । मलाई तिम्रो कृपाको भरोसा छ । यसकारण कि मैले कहिल्यै आफ्नो मुखबाट एकलाई दुई भनिनँ । सदैब मलाई तिम्रै ध्यान रह्यो ।’ सन् ११२३ मा उनी त्यस्तो ठाउँ समाधिस्ध भए ,जहाँ फुलका वृक्षहरुले उनको चिहानमाथि लटरम्म फुल बसाईरहेका छन् ।